ညီရဲသစ်: သူငယ်ချင်း...သို့ ...
ငါတို့ ... ဆက်လျှောက်ကြမယ်...။
မီးဆိုတာ ငွေ့ ငွေ့ ကျန်လဲ
သိမ်ငယ်စိတ်ကို တပ်လှန့် နှိုး
ငါတို့ ... ဆက်လျှောက်ရမယ်...။
ဘယ်သူမှ ခြေမချဖူးသေးတဲ့ အရပ်မှာ
Posted by ညီရဲသစ် at 08:52
mstint5October 2011 at 09:50
အရောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ တောင်းဆုလေးပြုခဲ့တယ် မောင်ညီရဲရေ။
Candy5October 2011 at 10:18
အစ်ကို့ကဗျာလေး ခံစားသွားတယ်နော်... ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ အားမလျောဖို့ ပြောထားတဲ့ ကဗျာလေးပဲ... :D
ကိုဇော်5October 2011 at 10:47
ဂွတ်ပို့စ် . . . ဂရိတ်ပိုအန်င် . .
မြသွေးနီ5October 2011 at 11:34
ကဗျာလေးဖတ်မိတော့ စေတနာတွေနဲ့ လောကဓံကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဖြတ်ကျော်နိုင်အောင် အားပေးထားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။
အခကိအခဲ မှန်သမျှ အောင်မြင်စွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေရှင်။
မိုးငွေ့......5October 2011 at 14:25
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy!5October 2011 at 14:33
ကဗျာကောင်းလေး ခံစားအားပေးလျှက်ပါ အကို....
SHWE ZIN U5October 2011 at 15:33
ကျေးဇူးဘဲ ညီရဲ ရေ ဆက်လျှောက်ကြမယ်
ညိမ်းနိုင်5October 2011 at 19:43
ကဲ......ဘယ်သူမှခြေမချဖူးတဲ့အရပ်မှာ ဘီဘီချဖို့ အဲ....မှားလို့...အောင်စည်
ဇက်ဗီ5October 2011 at 21:24
အေ....ဆက်လျှောက်ပဲ ကျန်တော့ တာ...ပတ်ဝန်းကျင် သစ်လည်း စိမ်းလိုက်တာ.....
blackroze6October 2011 at 01:56
ပဥာက်6October 2011 at 02:18
Anonymous6October 2011 at 17:10
ကိုဘလက်က ဒါမျိုးလည်းရတာကိုးးးးးးးးး.... :)
ဖိုးကြယ်6October 2011 at 20:24
ဂွတ်ဒ်ဂွတ်ဒ်....ကောင်းပါပေ၏ ကောင်းပါပေ၏ :)
မြစ်ကျိုးအင်း7October 2011 at 00:09
တပုဒ်လုံး မိုက်တယ်။ ဒီအပိုဒ် ဖွဲ့ပုံလေး ပိုကြိုက်တယ်။
မဒမ်ကိုး7October 2011 at 16:18
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) 8 October 2011 at 15:25
ညီရဲသစ်က ကဗျာလေးတွေလည်း အစပ်ကောင်းသားဘဲနော်
ခွန်အားတွေ ပေးနေတဲ့ ဒီကဗျာလေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မီးဆိုတာ ငွေ့ငွေ့ကျန်လဲ လောင်နိုင်တယ် ဟုတ်တယ်နော်
အခက်အခဲ ဘယ်လောက်တွေ့တွေ့ အားမလျော့ကြေးပေါ့